SEOReseller: White Label SEO Platform, Reporting na Ọrụ maka Alọ Ọrụ | Martech Zone
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ụlọ ọrụ na-ere ahịa dijitalụ na-elekwasị anya na akara, imewe, na ahụmịhe ndị ahịa, ha anaghị enwe oge ụfọdụ search engine njikarịcha (SEO). Nke a apụtaghị na ha agaghị enwe ihe ịga nke ọma maka ndị ahịa ha - ha na - abụkarị. Mana ọ pụtara na nloghachi ha anaghị enwetakarị ikike zuru oke iji nweta azụmaahịa ọhụụ.
Nnyocha adịghị ka ihe ọ bụla ọzọ ọ bụla n'ihi na onye ọrụ na-egosi n'ezie ebumnuche maka ịzụta. Mgbasa ozi mgbasa ozi na mgbasa ozi mgbasa ozi ndị ọzọ na-atụkarị anya ịmalite ime ka ị mata site na ịnweta ozi gị n'ihu atụmanya, engines ọchụchọ na-ewetara gị atụmanya ahụ n'onwe gị.
SEO bu isi ihe elere anya na oru m na enye ndi ahia m na emego m nke oma na ndi oru. Agbanyeghị, anaghị m ewere onwe m dị ka SEO Consultant n'ihi na m ka kwenyere na ọ bụ nke abụọ maka mbọ ịre ahịa. Ikwesiri inwe akara di egwu, ozi siri ike, imewe ịtụnanya, na ahụmịhe ndị ahịa kachasị mma… mgbe ahụ ndị ọrụ ọchụchọ ga-egosi. Ọtụtụ ụlọ ọrụ SEO na-eme ya na mgbanwe… na -echekarị ma na-enweta ọtụtụ okporo ụzọ, ha enweghị ike ịgbanwe okporo ụzọ ahụ n'ihi na ha enweghị ahụmịhe ahịa.
White Label SEO Ọrụ maka gị Agency
ỌNWeller ahịa na-enye azịza maka nke a - akara ọcha SEO, SEO Reporting, na SEO Ọrụ maka ụlọ ọrụ gị. Ndị ahịa gị na-enweta ike ị ga-eji na-etinyeghị ndị ọrụ ụlọ ọhụrụ, ị ga-enye ha ụlọ njikọ njikọ na-aga n'ihu, ịde blọgụ, ọrụ nrụpụta mpaghara, na peeji nke SEO, njikarịcha weebụsaịtị kachasị na akụkọ SEO amapụtara.
Nlere Onyinye Ọrụ SEO Nkeonwe Gụnyere:
Nyocha SEO na nyocha - Chọpụta ohere ọ bụla ị nwere ugbu a, ntinye okwu, yana ikike nke weebụsaịtị gị.
Nyochaa SEO mpaghara na nyocha - Chọpụta ohere ọkwa dị na mpaghara, isi okwu, yana ogo-ike nke weebụsaịtị gị.
Ecommerce SEO nyocha na nyocha - Gbanye ntụgharị ndị ọzọ ma mee ka ngwaahịa gị bụrụ ọkaibe gafee nsonaazụ ọchụchọ dị mkpa.
Keyword Research - nyochara nyocha na nyocha zuru oke, yana aro iji mekwuo okporo ụzọ.
Mmepụta Ihe - Gbaa ndị mmadụ ume isoro ha kesaa ya na mbipute blog mgbe ị na-ewepụrụ ndị ahịa gị ọdịnaya anyị.
Njikwa Ihe di na peeji - Na-ebuli ihe na ọdịnaya ọdịnaya gị iji bulie ikike ịchọta ya na edepụtara ya nke ọma.
Mpempe akwụkwọ Label White - ezigbo oge SEO ịkọwapụta dashboard maka ọhụhụ zuru oke na arụmọrụ mkpọsa.
Akụkọ na-acha ọcha ọcha - Nchịkọta Google, Google My Business, na Google Search Console, yana nsonaazụ ọkwa na SEO akụkọ ngwaọrụ iji mee ka ọ dịkwuo mfe iso ndị ahịa kwukọrịta.
Nzube Nrụpụta - Mepụta atụmatụ ahaziri maka SEO gị, Web Design, Social Media na atụmanya PPC. Sochie atụmatụ niile n'otu ebe!
Njikwa ọrụ - SEOReseller na-go ndị ọrụ kacha mma hụrụ ihe ha na-eme n’anya. Hapụ ha ka ha lekọta ọrụ ma zụọ onye ọ bụla nọ na otu gị.
Consultlọ Ọrụ na-agba izu - Onye njikwa ọrụ gị na ndị ọrụ anyị ga - eso gị rụọ ọrụ iji mee ka ọrụ ndị ahịa gị nwee ihe ịga nke ọma. Jiri ngwa na ikpo okwu ha, ị ga-enwe ike ilekwasị anya na ihe ọhụụ na ahụmịhe ndị ahịa.
Nyochaa ọrụ SEO buru ibu tupu ị kwadoo ọrụ SEO ị nwere ike itinye na onyinye gị na ụlọ ọrụ gị ma kpuchie ọrụ ịchọrọ ndị ahịa. Ọ dịghị mkpa ka ị kwụ ụgwọ ọrụ n'ime ụlọ ma ọ bụ chegbuo onwe gị banyere ịhazi ikike ịrụ ọrụ - Ihe omume SEO na-acha ọcha nke SEO ga-enye gị ihe onwunwe iji nwetafeefe ndị ahịa.
Nchịkọta aha SEO nchịkọta malitere na naanị $ 250 US wee gbagoo dị ka mkpa gị si dị. SEOReseller na-enyekwa nhazi weebụ, njikwa ịkwụ ụgwọ-kwa-pịa, mgbasa ozi mmekọrịta, njikwa aha ya na ọrụ ndị ọzọ.
Mụtakwuo Banyere SEOReseller
Ngosi: Abụ m Mgbakwunye maka ỌNWeller ahịa.
Tags: gị n'ụlọngaọrụ seo ọdịnayaazụmahịa eonnyocha nyochanjikarịcha peejinjikwa pponwe aha seonjikwa ahareseller seoAụlọ ọrụ gịseo n'elu ikpo okwuọrụ seoseo ngwaọrụndiigbo ikpeelekọta mmadụ mediaacha ọcha labeelu seo